जिज्ञाशा, शुक्रबारनै IPO आउने र वाडफाड हुने गर्दछ किन हाेला ? - Mero Online Guru
Mero Online Guru
This website provide the good quality content or information all reader
English Nepali Japanese Arabic Dutch French German Italian Korean Portuguese Russian Spanish
जिज्ञाशा, शुक्रबारनै IPO आउने र वाडफाड हुने गर्दछ किन हाेला ?
याे जानकारिमा मात्र जिज्ञाशा मेटाउन खाेजिएकाे हाे, कहिलेकाहि यी जानकारि पनि उपयाेगी हुन सक्छ ।
नेपालमा निश्कासन हुने IPO हरू IPO बाँडफाँडहरू अथवा अन्य अार्थिक गतिबिधहरूका काम प्रयजसाे शुक्रवार भएकाे देखेकाछाै ।
अब अाउने कम्पनिहरूले पनि IPO निस्काशन तथा बाँडफाडहरू सयद शुक्रवार नेै गर्नेछन् ।
हामी त्याे अनुमान गर्न सक्छाै तर १००% त नहुन सक्छ । किन त फेरी शुक्रवार नै छानेका हाेलान्? अरू बार पनि छन तर शुक्रवार प्रायजसाे किनहुने गर्दछ, जिज्ञासा हुन सक्छ तर याे जानिराख्न पर्ने र थाहा पाउनै पर्ने महत्वपुर्ण (इम्पाेर्टेन) कुरा त हाेइन, कहिले काहि मनमा जिज्ञासाहरू रहेकाे खण्डमा तेसलाइ मेटाउ भन्ने मात्र हाे ।
तर सरासर हेर्दा अथवा बुज्दाखेरी शुक्रवार भनेकाे लक्ष्मी माता काे अति प्रीय बार हाे, याे बारमा अार्थिक गतिविधि चलायनमा हुनु भनेकाे राम्राे कुरा हाे लक्ष्मी भनेकाे धन अनि धन भनेकाे हाम्राे सम्पति जसले हाम्राे जीवन शुखद वनाउछ ।
लक्ष्मी धनकाे बार शुक्रबार भएकाे हुदा हामी जाे कार्य गर्छाै जे अाम्दानी बडाउने साेच राखेका हुन्छाै तेहि बार बाट सुरू गराै भन्ने हुन सक्छ र अर्काे कुरा शुक्रवार नै लक्ष्मी माता काे कसरी भयाे भन्ने हुनसक्छ , शुक्रवार भनेकाे ९ ग्रह मध्यकाे शुक्रग्रह ( शुक्र देव ) काे अाफ्नाे बार हाे ।
शुक्रदेव भनेकाे कस्ताे हाे भने धन भैसकेपछि सुख समृद्धि अान्नदमय जीवनयापन गर्ने साथै त्याे धनलाइ कसरी चलाउने धन कसरी वृद्धि गर्ने अनि याे धन बाट कति अान्नद लिनसकिन्छ भन्ने ग्रह मध्यकाे शुक्रदेव हुनुहुन्छ।
तर कसैलाइ भने धनबाट तेति मजा नहुन सक्छ जस्तै ऋषि तपस्वि , साधु सन्त हरूलाइ भने यसकाे कुनै महत्व राख्दैन् ।
भाैतिक जगतमा अार्थिककाे एकदमै महत्व हुने हुदा धनबाट नै सबैचिज हुन सक्ने साथै सुखि जीवन साथै लग्जरि लाइफ विताउन पनि धनकाे नै भुमिका हुन्छ, यहि कुराकाे अथवा धनकाे अधिपति शुक्र ग्रह हुनुहुन्छ यसकाे अधारमा शुक्रदेव काे अाफ्नाे बार र लक्ष्मीमाता काे पनि अाफ्नाे बार दुइअाेटाकाे कम्बिनेशन हुदा यसमा राम्राे याेग हुने गर्छ ।
यहि कारणले गर्दा सायद कम्पनिहरूले शुक्रवार नै अार्थिक काराेवार सुरू गर्छन् अथाव IPO जारी गर्दछन् अनि बाडफाड पनि । शुक्रवार भनेकाे अाफैमा उत्तम बार हाे धनकाे लागी अब अाउने IPO पनि अास गराै शुक्रवार नै निष्काशन हुनेछ ।
Published February 24, 2021 By Guru
Categorized as Share Market Tagged Why IPO Issued & allotment be on only Friday in Nepal?, किन शुक्रबारनै IPO आउने र वाडफाड हुने गर्दछ हाेला त?
तपाइलाइ कस्ताे लाग्याे कमेन्ट गर्नुहाेस्	Cancel reply
ज्याेतिलाइफ इन्साेरेन्सकाे IPO कहिले देखि पाइन्छ त भर्न?
हेर्नै पर्ने सेयर बजारकाे नेपाली मुभि जुन अति उपयाेगी छ ।
भोलि मध्य भोटेकोशीको आइपिओ ।
DV lottery (डिभी) भर्नेलाइ यस्ताे छ खुशिकाे खवर ।
न्युनतम १० कित्ता बाट ५० कित्ता बनाउदा कत्तिकाे प्रभावकारी? यस्ताछन् फाइदा भन्दा वेफाइदा ।
अब IPO वाडफाड पछि ५, ६ दिन सम्म पनि हर्न नपाइने हाे त ? यस्ताे यसरि भएकाे हाे?।
म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्नेकाे लागीअाजदेखि अायाे इक्युटि फण्ड।
२ अर्ब २३ कराेड बरावर १२ कम्पनीकाे IPO अाउदै - Mero Online Guru on के साच्चिकै सेयर बजारबाट कराेडपति बन्न सकिन्छ त?
मेराे अनलाइन गुरू ले अति अावाश्यक जानकारमुलक सुचना, ज्ञान, प्रविधि साथै सेयरबजारकाे लगाएतका सकेसम्मकाे सामाग्री ल्याउने प्रयास गरेकाे छ ।
मेराे अनलाइन गरू तपाइकाे अाफ्नै वेवसाइड हाे जहाँ तपाइलाइ चाहिने जानकारी अाउने दिनमा अतिप्रभावकारी रूपमा पाउन सक्नुहुने छ ।
हाम्राे फेसबुक पेज लाइ लाइक गरि हामि सँग जाेडिराख्नसक्नुहुने छ ।